Amantombazane emfashini ayazi ukuthi ama-snikers awawona ama-chocolate ashaqisayo, kepha izicathulo ezinomdlalo. Zibukeka njengezingcweti, kodwa ngesikhathi esifanayo zihluke kakhulu kubo. Ekuqaleni kwekhulu lama-20, abashayeli baqala ukubiza uhlobo olukhethekile lwezicathulo. Isici esikhethekile salezi zithukuphuku yisiphequluli senjoloba.
Lezi zicathulo zikhululekile kakhulu futhi zikuvumela ukuthi uhambe uthule. I-Snickersachannosti ingabonakali empilweni yomuntu. Lena izicathulo eziphelele kubantu abakhuthele. Bayahamba kahle, behamba, umlenze awukhathali nhlobo. Futhi njengoba kwenzeka, ama-snikers angagqoke hhayi kuphela nge-jeans nemidlalo, manje kukhona zonke izinhlobo zezinhlobonhlobo ezihlotshiswe ngamatshe, ama-rhinestones namameva.
Okunye okungcono kakhulu kwezicathulo - abashayeli be-snickers kwi-hiddentank. Uma ukholwa odokotela, khona-ke sinconywa ukuba sigqoke izicathulo esithende 3-4 cm. Izimo ezimbi zinganikeza umthwalo ongalingani kuwo wonke umzimba, futhi lokhu kuholela ezinyaweni ezinyaweni. Futhi ngo-snikersah lokhu ngeke kwenzeke, bangakwazi ukuhamba usuku lonke.
"Abakwa-Snickers", noma kunalokho "snyk" kusuka ngesiNgisi bahumusha ngokuthi "ukuhlambalaza." Ama-sneakers on the wedge abukeka enhle futhi angahlanganiswa nezitayela ezihlukahlukene. Bavumela intombazane ukuba ihambe kahle.
Umlando we-Snykers washiya ekhulwini le-18 leminyaka elikude. Ngaleso sikhathi, ukuthandwa kwakhe kwakuthola izicathulo emgqeni, bebizwa ngokuthi ama-plimsols. Babenjengezicathulo ezinezintambo ezinobuthi. Cishe ngo-1830 baveza "amasinki". Zenziwe zenziwe ngendwangu enomuthi owodwa werabha.
Isigaba esilandelayo kwakuyisibonelo esithuthukisiwe samasineki ngo-1892 kusukela enkampanini ethi "Rubber Company". Ukukhiqizwa kwamasonto abaduni beqala ngo-1917. Kwakuwukuzalwa kwamaSneakers. Khona-ke ngokokuqala ngqa kwenziwa izitebe zabadlali be-basketball. Zakhiwe nguMarcus Converse. Kodwa abaqhamukayo babengathandwa kakhulu.
Futhi ngo-1924 abantu abadumile emhlabeni wonke abadumile beyizinyoka ezivela e-Adidas yenkampani. U-Adi Dassler wadala ama-sneakers, awaqamba ngokuthi uyabaluleka. Ngokushesha umfowabo wadala abashayeli bezinkampani e-Puma. Ekuqaleni kwekhulu lama-20, izicathulo zazisetshenziswa njengezemidlalo kuphela. Kuphela eminyakeni engama-50 kwaba yinto ejwayelekile yansuku zonke yokuphila kwabantu abavamile. Ngo-1970, abadlali be-snickers baqala ukuthandwa phakathi nonyaka wonke. Izimboni zezinhlobo ezahlukene zezemidlalo zaqala ukuphuma.
Kodwa bonke laba bahlaziye babefana namaswidi. Futhi asikhulumi ngezicathulo ezinjalo. Futhi ngonyaka ka-2011, ngesandla sokukhanya somklami u-IsabelMarent, ama-sneakers aphenduka izicathulo ezithakazelisayo nezesimfashini! U-Isabel wayethanda ukuzama futhi wayefuna ukuba ngumklami odumile. Wathola. Ngo-2011, uMarant wabonisa umhlaba umbono wakhe wezemidlalo. Izimboni ezisemgodleni zahlaba umhlaba wonke! Manje zonke izinkanyezi ze-showbiz nazo zonke izinkunzi zezingonyama zezwe zinezingubo zokugqoka eziseSneakers Isabel Marant.
Igama elifanele lesi sihlangu "I-Sneakers Isabel Marant." Nakuba abaningi bakhetha ukubiza ngokuthi "Maranta". Lezi zicathulo zanqoba izinhliziyo zabesifazane, ngokushesha nje lapho umFulentshi ekhishwa iqoqo lakhe lezicathulo. Abaqaphi bacele bonke abakwa-fashionistas emhlabeni.
NguSnykers Isabel Marant manje owaziwa kakhulu phakathi kwamamodeli. Lezi zicathulo zomhlaba wonke, ezingagqokelwe kuphela ijee, kodwa futhi zihlanganiswe nezingubo, ama-shorts, ama-trousers kanye nama-junks. Zihlanganiswe nezikhumba, izinto ezibunjiwe nosilika. Amamodeli manje akhishwa ngemibala ehlukene futhi azohambisana nanoma iyiphi i-fashionista. Ukuphakama komgodla kungama-6 kuya ku-8 cm. Bakha futhi banwebe imilenze yentombazane.
Yini okufanele ugqoke amacici?
Izimbangi ziyizicathulo zomhlaba wonke. Lezi zicathulo zesitayela kuzo zonke izikhathi. Ukuze ukukhiqizwa kwabo basebenzise isikhumba, ikhwalithi yekhwalithi, i-canvas. Ngaphakathi kukhona umcibisholo ofihlekile, owandisa imilenze futhi uzinze.
Abashayeli bezintambo babheka kahle ngama-shorts, ama-breeches nemidlalo yezemidlalo. Ngisho ngaphandle kokuhlobisa okuhlukile, ama-mantan abukeka enhle emlenzeni. Banobuhle, bahlanjululwe futhi bahlelekile. Ungazihlanganisa ngokuphepha ngesitayela se-kazhual (isitayela sezingubo zansuku zonke, lapho kugcizelelwe khona induduzo nokulula).
IJeans. Ngimaphi ama-jean okufanele ngiwakhethele ama-snikers? Kungcono ukukhetha onobuhle bezithombe ezinama-tapered noma ama-panty skinny. Bayokwenza udonga. Uma ugqoka amabhulukwe noma ama-jeans amathoni alula, khona-ke amacici kufanele aphume kulolu hlu lobubala. Uma ugqoka amahhashi omnyama, khona-ke ama-snickers angaba nombala. Amabhulukidi amaningi anombala kufanele agqoke ngaphansi kombala ofanayo we-arrowroot. Kule nhlanganisela - kuyinketho yokuwina. Uzoba into ephathekayo. Abanye bahlanganisa maranth nge-leather leggings, futhi bathi - kubukeka kuhle!
Izingubo zangaphandle. Iziphambano zamakhosikazi zibukeka zikhulu ngaphansi kwejacket lesikhumba. Ungakhetha noma yiluphi uhlelo lombala futhi ujabulele isitayela sakho. Ukubukeka ngokukhethekile kwe-chic kunciphise izikhumba zesikhumba nge-arrowroots. Okukhethwa kukho okuhle kakhulu yi-arrowroots ehlangene nokudubula okugqamile kwe-swiss. Namuhla, kwenziwa izinguquko ze-snickers nezinhlobo zasebusika, ngakho-ke bangakwazi ukugqoka ezinye izibonelo zamajackethi angaphansi.
Ama-Hoodies. Ama-morante amahle kakhulu anama-jeans nama-hoodies. Ungakhetha "kangaroo" nge-zipper. Isithombe esihle somgwaqo sokuhamba. Futhi ukuze uvele esixukwini, kufanelekile ukugqoka izinto ezibukeka izinto ezikhanyayo nama jeans ngemivimbo.
Amantombazane wezikhumba abukeka enhle ngezimpahla zokugqoka. Ngokuvamekile bangabomvu noma umbala ompunga. Kuzobalulekile ukuba bathathe ihembe ebhokisini. Ingubo enjalo yokuqala. Futhi uma kubanda manje, wabeka ipaki phezulu. Uzobukeka ube nemfashini ngale ndlela. Ukubukeka okunamathekisthi izitebhisi zabesifazane ngaphansi kwesiketi se-midi nezibuko ezinkulu ngenxa yesigamu sobuso.
Izingubo. Sikhohliwe ukusho ukuthi izicathulo ezinjalo "zezemidlalo" zingahlanganiswa nesigqoko se-chiffon. I-gait yakho elula izokunika umbono. Kuyoba kuhle kakhulu.
Inhlanganisela enhle yama-sneakers anezingubo ezimfushane nezikhwama ze-denim. Ungagqoka i-sweatshirt noma ungene ngaphansi kwezimfushane zakho, uzobe usuhle futhi uhlelekile. Ungazama ukugqoka ukugxilisa ingubo futhi i-T-shirt egcwele. Namuhla, lesi sithombe sinemfashini phakathi kwabantu abasha. Kodwa ungakhohlwa ukuthi akuzona zonke izinto ezifashisayo ezifanelana nathi. Enye intombazane ingabheka ngembatho enjalo nje emnandi, kanti enye-ingenangqondo.
Ubucwebe bezindleko. Ngokuphathelene nezesekeli, awukwazi ukuzikhawulela. Ngempela, konke kulungele ukubulala. Ungagqoka izikhwama, amaketanga, ubuhlalu, njll. Okufanelekile kakhulu ubuhlalu obude namasongo okuxekethile.
Siyaxwayisa kuphela ukuthi ama-sneakers awakwazi ukugqoka izikhwama ezibiza. Kodwa mhlawumbe waziqagela wena. Futhi-ke, amacici yizicathulo eziphelele zansuku zonke. Iziphambano ezikhanyayo nezikhululekile zakhukhula emhlabeni wethu. Ngakho-ke, amantombazane kufanele abe ngendwangu yesigqoko salezi zinsimbi ezimnandi zaseFrance. Bakhohlwa ngokuphelele ukuthi unezicathulo.
Ngeshwa, futhi mhlawumbe kwabaningi, futhi ngenhlanhla, manje ama-sneakers u-Isabel Marant aqala ukukopisha. Futhi ukuthola i-fake kulula kakhulu kuneyokuqala. Ungawahlukanisa kusukela kuphela. Esikhathini sokuqala, i-sole iyigqinsi futhi igcwele, iphethini linomumo wesilinganiso, futhi ngendlela ebonakala ngayo njengensimbi.
Ngaphambi kokuthenga, qiniseka ukuthi uqaphele ukuthi ukuchohloka kwahlelwe kahle futhi kwakungenayo izimpawu zokulinganisa. I-original ine-insole ethambile futhi ithebhu elulweni. Ngakho uma uthenga okokuqala, bheka kuqala ku-intanethi, njengoba ibonakala, ukuze ungalahlekelwa imali kude. Lezi zinambuzane zizwa iphunga, ngoba ziphathwa ngezindlela ezikhethekile zokulondoloza umbala isikhathi eside.
U-Isabel Marant wenza ukuphumelela ngesitayela semfashini. Waphenduka impilo yethu futhi wasinika izinhlamvu ezintsha ezintsha. Sinezicathulo zangaphambili, ezisikhathi eside zihlala phezulu ezintweni ezinhle kakhulu zekhabethe. I-Marantivpishitsya kunoma yikuphi ikhabethe futhi wenze imilenze yakho ingenakuvinjelwa futhi ifinyeleleke.
Indlela yokunakekela kahle izicathulo zasebusika?
Umlando wemiklamo yokwakha
Indlela ukuhlobisa amabhuzu wazizwa
Izicathulo kanye nobuntu
Ikhekhe ngesitshalo seqanda
Yeka ukuthi kunzima kangakanani ukuba yisikhonzi sendiza!
U-Neil Patrick Harris
Izakhiwo zokwelapha ze-baking soda
Kanjani ukukhula kwezinwele ngokushesha: Ingabe kungokoqobo ukwandisa ubuchopho ngo-20 cm ngesonto?
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngo-15 kg ngokushesha futhi ngaphandle kokulimala empilweni
Ukupheka okudumile kokudla okulula okuvela eklabishi ngenyama
Ukubeletha ezindaweni zomphakathi
UJeanne Friske washona
I-Monogram ezipikili: izithombe zesinyathelo ngesinyathelo sabaqalayo
Mini-cutlets kusuka turkey kuya steamed
Inkukhu ethosiwe ne-anyanisi
Kungani amadoda engafuni ukushada?